कस्मिरकी मेहेक जस्तै आफ्नो बुवा खोज्दै नेपाल आएकी यी चेलीलाई पनि अफ्नो बुबा भेटाउन सहयोग गरौं ! – TAJA KHAWAR
January 6, 2019 Taja Khawar समाज 1
मेहक बानुकी आमा भेटिएको समाचार थाहा पाएपछि जर्मीनकी आईसा देवी ईन्ज पनि आफ्ना बाबु खोज्दै हाम्रो कार्यालय आएकी छन् । उनका बाबु १९८० को दशकमा बसन्त कुमार गुरुङ स्वीजरल्याण्ड घुम्न जाँदा उनकी आमासँग प्रेम सम्बन्ध भएपछि आँफू जन्मिएको उनि बताउछन् ।
आफ्नो बुवाको अनुहार समेत नदेखेकी उनलाई बुवा हेर्न मन छ । बुवासँग बोल्न मन छ । हजुरआमाको काखमा हुर्किएकी उनकी आम स्विजरल्याण्डमा भएपनि उनी आफ्नो श्रीमानसँग जर्मनीमा बस्छन् ।अहिले भने उनलाई आफ्नो परिवारका सबै सदस्य सँगै हुन मन छ । आमालाई बुवा भेटाउन मन छ ।
आफ्नो र बाबुको पहिचानको सँगै दुई देशको संस्कार जोड्न पनि बाबुलाई खोजिरहेको उनी बताउँछन् । बाबुको एउटा फोटो र उन्का बुवाले सही गरेको यो पत्र मात्र छ उनिसँंग । बाबुको वास्तविक अनुहार समेत नदेखेकी उनले बाबुलाई भेटेर जिन्दगीका कथा व्याथा बाँड्ने सपना भने देखेकी छन् ।
कतिसम्म भने उनले आफ्नो बुवाको सम्झनामा हातमा ट्याटु पनि हानेकी छन् । मेहेक बुनु जस्तै आईसालाई पनि आफ्नो बुवा भेटिनेमा पुरा विश्वास छ । कतिसम्म भने उनकी छोरीपनि हजुरबालाई भेट्न हतारिएकी छन् ।
अत्यन्तै मन छुने श्रीमन र श्रीमतीको कारुणिक अधुरो कहानी, यस्तो कसैलाई नहोस, एकपटक पढ्नुहोस
रविले आफुलाइ अभागी भन्दै यसरी मागे माफी: वाह ! रबि यहि हो हामिले खोजेको…. (हेर्नुहोस् भिडियो) – News Ma